एमालेको बुद्धिजीवि संगठन मोरङमा पनि समानान्तर कमिटी
विराटनगर। नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादका कारण जनवर्गीय संगठनहरुमा पनि समानान्तर कमिटीहरु गठन गर्ने क्रम बिस्तार हुँदै गएको छ । कोरोना महामारीकै बीच शनिबार विराटनगरमा नेपाल बुद्धिजीवि परिषद्को जिल्ला भेला आयोजना गरी समानान्तर कमिटी गठन गरिएको छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय बुद्धिजीविहरुको भेलाले प्राध्यापक भोजराज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नेपाल बुद्धिजीवि परिषद्को ९१ सदस्यीय जिल्ला कमिटी गठन गरेको छ । नवगठित जिल्ला कमिटीमा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष बन्धु पोखरेल उपाध्यक्ष बनेका छन् भने कानून व्यवसायी कोषराज न्यौपाने सचिव छन् । भेलाले सहसचिवमा प्राध्यक्षपक देवी पन्थीलाई र कोषाध्यक्षमा मिथिलेश मिश्रालार्य चयन गरेको परिषद्का केन्द्रीय सदस्य डा. उद्धव पोखरेलले जानकारी दिए ।
जिल्ला भेलाले प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको संयोजकत्वमामा १५ सदस्यीय सल्लाहकार समितिसमेत गठन गरेको छ । प्राध्यापक डा. खगेन्द्र आचार्य, मााधव भट्टराई, टेकेन्द्र पोमु, लक्ष्मी श्रेष्ठ, उमेश न्यौपाने लगायतका अग्रज बुद्धिजीविहरु सल्लाकार समितिमा रहेका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रदेश १ का इन्चार्ज भीम अचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको भेलाको अध्यक्षता परिषद्का केन्द्रीय सदस्य डा. उद्दव पोखरेलको अध्यक्षता र पूर्व जिल्ला उपाध्यक्ष हिक्मतबहादुर वस्नेतको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरु घनेन्द्र बस्नेत, जीवन घिमिरे, महेश रेग्मी तथा संविधान सभा सदस्य मिना यादव लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
शनिबार, १८ बैशाख, २०७८, रातीको ०८:०२ बजे